warkii.com » Atariishada Taapsee oo farxada dhalashada lawadaagtay Ayushman iyo mashruuca ee islasoo wadaan!!
Atariishada Taapsee oo farxada dhalashada lawadaagtay Ayushman iyo mashruuca ee islasoo wadaan!!
Maanta Aktarka Ayushmann Khurrana ayaa maanta ah dhalashadiisii ​​36-aad. Taapsee ayaa barteeda Instagram-ka kula wadaagtay Hampalyada dhalashada Aktarka ‘Badhai Ho’. Taapsee ayaa la wadaagtay taageerayaasheeda sawiro iskudhaf ah oo laga soo qaaday goos gooska mashruucooda aan la garanaynin magaciisa ee isla soowadaan labadooda, waxayna qortay,
“dhalasho wacan Khurrana! Aynu sahamino fagaaraha isboortiga sanadkan ” Ayushmann xaaskiisa Tahira ayaa iyadana lawadaagtay sawir hampalyo,Waxay qortay, “Inaad haysato keega oo aan cuno sidoo kale! ayushmannk happybirthdaysoulmate ” ayee kusoo.koobtay qoraalkeeda
Dhinaca kale, dhowr qofoo kale oo caan ka ah Bollywood oo ay ka mid yihiin Shilpa Shetty Kundra, Angad Bedi, iyo Neha Dhupia iyo kuwa kale ayaa sidoo kale la arkay iyagoo u rajeeyay jilaaga maalintiisa gaarka ah farxad.
Dhanka shaqada, Taapsee waxaa ugu dambeysay filimka ‘Thappad’ ee Anubhav Sinha halka filimka Ayushmann ugu dambeeyo uu ahaa ‘Shubh Mangal Zyada Saavdhan’ oo uu la waday Jitendra Kumar. Taapsee ayaa lagu arki doonaa filimka Mithali Raj ee ‘Shabaash Mithu’ oo ay kuweheliso ‘Rashmi Rocket’ iyo ‘Haseen Dilruba.’
Previous articleRanveer Singh oo shaqadiisa dib u bilaabaya lix bilood kadib, Muxuu soowadaa Singh?